Phakathi Kwethu Tshixa iScreen - Zonke iinkcukacha zityhiliwe | XperimentalHamid
Phakathi kwethu Ukutshixa isikrini - Zonke iinkcukacha zityhiliwe
Novemba 22, 2020 by IJaveria Dinar
Ukuba ungumthandi Phakathi kwethu kwaye ujonge amaphepha aphakamileyo odonga, imvelaphi kunye nezikrini zokutshixa zeefowuni zakho, uya kuyithanda into entsha ethi 'Phakathi kwethu' yokutshixa isikrini.
Ewe uvile ngokuchanekileyo, phakathi kwethu ukukhiya isikrini okanye phakathi kweLock ngoku iyafumaneka kwiifowuni ze-iOS kunye neefowuni zeAndriod.
Kuya kufuneka sele uqhelene nathi Phakathi kwamaphepha aseludongeni kodwa kuya kuba kuhle ukufumana i-Keypad ye-Us yokutshixa isikrini.
Ukutshixa iphedi yamaqhosha yesikrini kuyafana nomsebenzi weReactor kwiSkeld of Among Us kunye neziphumo zesandi. Isikrini somgunyathi esivela phakathi kwethu sikwaboniswa ukuba igama eligqithisiweyo lifakiwe ngokungachanekanga. Isikrini sibonisa umyalezo 'Awunguye umnini wale fowuni'.
Kananjalo unokumangaliswa kukwazi ukuba le nto yenziwe yifani yoPhakathi kwethu. Yiyo loo nto esenza ukuba isikrini sivale iPhones. Umlandeli uhamba ngegama elithi Liten okanye @Litteeen kwi-Twitter. Oku kusebenze kakuhle kwii-iPhones ezininzi ngaphandle kwesiphazamiso.
Phakathi kwethu Ukutshixa isikrini kuGoogle Play
Ungayifumana njani i-AmongLock kwi-iOS?
Phakathi kweempawu ezingaphezulu kweLock
Iindaba ezimnandi zabasebenzisi be-Android kukuba le phakathi kweLock ikwafumaneka kuGoogle Play. Ke, phakathi kwethu Abadlali abasebenzisa i-android banokuyonwabela le nto yokutshixa.
Ezinye zeempawu eziboniswe nguGcino lukaGoogle zezi: Phakathi kwethu HD / 4K / 8K iphepha lodonga kunye nemvelaphi yokutshixa izikrini, inokusetyenziswa kuyo nayiphi na ifowuni ye-Android kunye neetafile ngaphandle kwe-intanethi, i-Imposter kunye ne-Crewmate yamaphephadonga kunye nokutshixa isikrini. Ngamanye amagama, ezoyikekayo phakathi kwethu imifanekiso kunye nemifanekiso iya kufumaneka ngale nto.
Uninzi lokujonga kwakhona kulungile kule app. I-App ibalwe nge-4.3 / 5 ethathwa njengamanqaku afanelekileyo. Inye kuphela into eyicaphukisileyo abanye babasebenzisi ziintengiso ezisebenza kuyo. Ndicinga ukuba le yingxaki eqhelekileyo yazo zonke iiapps ezisimahla kuGoogle
Ayizizo zonke izixhobo ze-iOS ezinokuba nesi sikrini sokutshixa kuba zizixhobo zejele kuphela eziya kuba nakho ukuyiqhuba. Iyafumaneka kwiinguqulelo ze-13 kunye ne-14 ze-iOS.
Ungayifumana simahla kwindawo yokugcina iLitten kwitheyibhile yeMithombo yeCydia. Nangona kunjalo, abantu abaninzi bazamile ukuthengisa oku kodwa uLitten wabaphendula kwi-Twitter kwaye wabhengeza ukuba iyafumaneka simahla. Zonke iinguqulelo emva kwe-3 zinokwenziwa ukuba kuqhekezwe ejele.
Ngexesha, i-jailbreak iya iqhubela phambili kwaye ilungelelaniswe. Kodwa, iNkampani yeApple izama ukunqanda ukuqhekeka kweentolongo ngokwazisa iinguqulelo ezinamabala kwisoftware kwaye nje ukuba uhlaziye isixhobo sakho, awungekhe uyifumane!
Kwakhona ulumke kuba ukwaphula isixhobo entolongweni kunokuba nefuthe elibi kwisixhobo sakho. Oku kubandakanya ukubangela iingxaki kwezokhuseleko, kunokuthintela isixhobo ekufumaneni uhlaziyo lwexesha elizayo, ukwenza izitena ngefowuni. Okokugqibela kodwa kungaphelelanga apho, inokuyiphelisa iwaranti yesixhobo.
Ke, zilumkele ezi zisongelo kunye neewebhusayithi ezininzi ezikwi-intanethi ezikukufaka isixhobo se-iOS kuba kukho amathuba aphezulu okuba unokufaka ii-malware / iintsholongwane ezahlukeneyo ezinokuthi zibeke emngciphekweni ubumfihlo bedatha yakho. Ke, uninzi lwezi webhusayithi ziyinyani kwaye zikhohlisa.
Kunye nescreen sokutshixa, yenza ezinye izinto ezimbalwa kwifowuni yakho ye-iOS njengokuphulukana nomnxeba ongxamisekileyo kunye namaqhosha asemva, okwenza ividiyo njengephepha lodonga kunye nokufihla oQhushululu lobuso xa uswayipha iscreen.
I-tweaks phakathi kweLock yamkelwe kakuhle ngabalandeli njengoko ifumene iivoti ezingama-50 amawaka kwiReddit.
Funda ngakumbi malunga: Ukhuphelo lweOmnisd
Kubasebenzisi be-Android, ukufumana phakathi kwethu i-Lockscreen kubonakala kulula kodwa kwi-iOS kuya kufuneka ubeke umngcipheko kwifowuni ukuze uyifumane. Eyona ndlela ikhuselekileyo yokuqhekeza i-iOS yakho iyafumaneka kwi-subreddit enayo yonke inguqulelo ekhutshiweyo ye-jailbreak enecandelo le-FAQ elahlukileyo.
Ukuyifaka kuwe i-iPhone kulula. Kuya kufuneka ulandele amanyathelo ambalwa alula. Yonwabela i-Screen Lock yakho phakathi kwethu.
iindidi Mobile Apps, Reviews tags Ufumana njani phakathi kwethu isikrini sokukhiya?, Yintoni ephakathi kwethu yokuTshixa iScreen? Post yokukhangela
Umceli mngeni we-AC Valhalla Hallucination-Isikhokelo esigqibeleleyo
Billionaire UThixo wemfazwe iNoveli Isahluko 1983 - 1984